Madaxweynaha maamulka Puntland oo Garowe Kula Kulmay Nicholas Kay ”SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Madaxweynaha maamulka Puntland oo Garowe Kula Kulmay Nicholas Kay ”SAWIRRO”
Madaxweynaha maamulka Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa gelinkii dambe ee maanta magaalada Garoowe ku qaabilay Wakiilka Xoghayaha guud ee QM u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Danjire Nicholas Kay iyo wefdi balaaran oo uu hogaaminayo oo booqasho ku yimi Puntland.
Madaxweyne Gaas ayaa kullan gaar ah la qaatay Danjire Nicholas Kay waxaana ay kawada hadleen horumarka baaxada leh ee ka soconaya Puntland, la dagaalanka koox diimeedka Ururka UGUS, hiigsiga cusub ee Soomaaliya 2016 iyo guud ahaan Soomaaliya isbadalka lagarabo.
‘’Waxaa sharaf weyn noo ah in maanta aanu halkaan ku soo dhaweyno Wakiilka Xoghaya Guud ee QM ee Soomaaliya oo maanta nagu soo booqday Magaalada Garoowe ee Caasimada Puntland, imaanshihiisana waan ku faraxsanahay waana markii todobaad oo uu noo yimaado ”Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
” Runtii wada hadalakayagii waxaa uu ahaa mid si fiican u soo dhammaaday, waxaan rajaynaynaa inaanu wada shaqayn dhow yeelano si aan u sii amba qaadno geedi socodka nabada Soomaaliya Insha’allah ”Ayuu hadalkiisa sii raaciyey Madaxweyne Gaas.
Dhinaca kale Danjire Nicholas Kay ayaa Madaxweynaha ku amaanay Guusha ay Puntland ka gaartay dagaaladii Galgala isagoona ciidanka Puntland ugu hambalyeeyey dhabarjabka xooga leh ee ay u gaysteen koox diimeedka Ururka Al-shabaab.
Shirkii Looga Hadlayay Maal-gashiga Soomaaliya oo Nairobi Lagu Soo Gabagabeeyay ”SAWIRRO”